Kiisaska Corona oo ku sii kordhaya Dalka Sweden Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenKiisaska Corona oo ku sii kordhaya Dalka Sweden
Kiisaska Corona oo ku sii kordhaya Dalka Sweden
April 1, 2021 Wararka Sweden, Wararka Maanta Somaliska 0
Cudurka Corona ayaa ku sii kordhaya Iswidhan. Tan iyo shalay, 8,305 kiis oo corona cusub ah ayaa la diiwaan geliyay, maamulka Caafimaadka Sweden ayaa shir jaraa’id ku sheegay .
– Waxaan dhawaan gaari doonnaa heer la mid ah intii lagu jiray mowjaddii labaad, ayay tiri Sara Byfors, oo kamid ah Maamulka caafimaadka , Folkhälsomyndigheten, sida laga soo xigtaySVT.
Dalka Iswiidan waxaa la soo daristay hoos u dhac ku yimid tirada dhimashada corona, laakiin intaas ka badan maahan. Ilaa shalay, 33 cusub oo laxiriira corona ayaa ladiwaan galiyay dhimashadooda . Guud ahaan, dhimashada ayaa mareysa 13,498 Qof.